ထိပ်တန်း5ဥရောပမှာတော့အများစုကရိုမန်းတစ်ရထားခရီး | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား > ထိပ်တန်း5ဥရောပမှာတော့အများစုကရိုမန်းတစ်ရထားခရီး
သငျသညျအနှစ်အိမ်ထောင်သက်ပါပြီပဲဖြစ်ဖြစ်, တစ်ခုသို့မဟုတ်ကြားဆက်ဆံရေး၏အစောပိုင်းအဆင့်နေဆဲ, စုံတွဲတိုင်း အတူတူသုံးစွဲအရည်အသွေးမြင့်အချိန်ကနေအကျိုးရှိနိုင်သည်. Valentine Day ကိုတစ်ခုအားထုတ်မှုစေရန်အထူးသဖြင့်ကောင်းတဲ့ဒါဟာင်. မီးရထားနဲ့ခရီးသွားကြ တစ်ဦးရင်ခုန်စရာစတင်ပြီးပြည့်စုံသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်နှင့် ပျားရည်ဆမ်းခရီးထွက်ပြေးဖို့ သင်ချစ်တဦးတည်းနှင့်အတူ. ကျေးလက်ကတဆင့်ဒါမှမဟုတ်တောင်များကျော်တိတ်တဆိတ်မြန်ဆန်. အတိတ်ချစ်စရာကောင်းသွားလာလမ်းကြောင်း, ရှေးဟောင်းမြို့များတစ်ခုသို့မဟုတ် glacial ၏ကမ်းခြေတလျှောက် အင်းအိုင်. ဤတွင်များမှာ ထိပ်တန်း5ဥရောပတိုက်တွင်အများဆုံးရင်ခုန်စရာရထားခရီး. တစ်ခုချင်းစီကို Valentine Day ကိုအထူးတစ်ခုခုကမ်းလှမ်း.
လန်ဒန် သို့ ဗင်းနစ် is our First Romantic Train Journeys
ဤ ရထားခရီး သင်နှင့်စိမ်းလန်းစိုပြေတဲ့အားဖြင့်သင်တို့၏ခစျြတျောတစျဦးဆောင်ခဲ့ဦးမည် ကျေးလက်. ထိုအခါသင်သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံများ၏အထင်ကြီးတောင်များအတိတ်လှိမ့်မယ်များနှင့် သြစတြီးယား. နောက်တစ်ခု, သင်နောက်ဆုံး Venetian Venetian Grand Canal ၏ဘဏ်များသို့မရောက်မီသင်သည်အီတလီနိုင်ငံ Verona ၏အလှဆုံးရှုခင်းကိုရထားဖြင့်တွေ့ကြုံခံစားလိမ့်မည်.
ပဲရစ် nice, ပြင်သစ်
Talking the train through France you’ll be exposed to the famous color and light of the country. ခရမ်းရောင်လာဗင်ဒါလယ်ကွင်းထဲကနေ Cote d'Azur အပြာရောင်ရေ. ရွှေနေရောင်ခြည်ဥသုံကအားလုံးကို immerses သောလမျးမှာအံ့ဩခြင်း, သင်တစ်ဦးအားရစရာဘို့အတွက်ပါပဲ. လူအပေါင်းတို့၏အများဆုံးရင်ခုန်စရာမွို့၌စတင်ခြင်း, ပဲရစ်, သင့်ရဲ့ရထားလမ်းခရီးသိသိသာသာကမ်းခြေ၏ dreamy ကမ်းရိုးတန်းလွန်သွားပါလိမ့်မယ်. သင်လည်းပါလိမ့်မယ် သာယာလှပသောရွာများကိုကြည့်ပါ နှင့်နေကြာနှင့် Provence ၏လာဗင်ဒါလယ်ကွင်း.
ရောမမြို့မှ Florence, အီတလီ
ယဉ်ကျေးမှု၏နှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏တွေ့ကြုံခံစား နှစ်ယောက်အထင်ကရအီတလီကျောက်မျက်, အားလုံးတဦးတည်းရင်ခုန်စရာစွန့်စားမှုအတွက်. Florence ၏လက်ရာနှင့် Tuscan ခဲဘွယ်စားဘွယ်ကိုကြည့်ပါ. လည်း, ရောမမြို့၏ဦးရစ်သရဖူရတနာသွားရောက်ကြည့်ရှု, ဗာတီကန်. အဘယ်အရာကိုပိုကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်?
You and your loved one can travel by train between two wonderful cities as the magnificent Italian countryside unfolds past your carriage window. ဤသည်ဆက်ဆက်ဥရောပမှာအများဆုံးရင်ခုန်စရာရထားခရီးတစ်ခုဖြစ်တယ်.
Levanto , La Spezia မှ – ထိပ်တန်း5ဥရောပတိုက်တွင်အများဆုံးရင်ခုန်စရာရထားခရီး
ဒီနည်းနည်းအပိုင်း ရထားလမ်းငါးအီတလီတာဝန်ထမ်းဆောင် Riviera villages of the Cinque Terre သိသိသာသာဖက်ရှင်အတွက်. ရထားခရီးစဉ် လမ်းတိုင်းတစ်နာရီထက်လျော့နည်း, ဒါကြောင့်ရထားတလမ်းတည်းဖြင့်ယူ. ထိုအခါသင်ဖြုန်းနိုင်ပါတယ် တစ်ရက်တောင်တက် အံ့ဖှယျရွာ-ချိတ်ဆက်နောက်ကျောကိုသင်စတင်ဘယ်မှာမှလမ်းကြောင်း. ဤ ရထားခရီး အဆိုပါ Ligurian အဘိဓါန်ပင်လယ်ပြင်၏အမြင်များနှင့်အတူအမှန်တကယ်အံ့မခန်းဖြစ်ပါတယ်, pastel ကျေးရွာပေါင်း, ကျန်ကြွင်းစပျစ်ဥယျာဉ် အဖြစ်တက်ကြွလယ်ကွင်း.
ဇူးရစ်၌သင်တို့၏စိတ်ကူးယဉ်ရထားခရီးကိုစတင်. Bahnhofstrasse သွားရောက်ကြည့်ရှု, အများဆုံးတဦး ဆွဲဆောင်မှုစျေးဝယ်လမ်းများ ကမ္ဘာပေါ်မှာ, နှင့် memento ဝယ်ဖို့. အဆိုပါအများကြီး-ကိုခစျြ Kunsthaus အနုပညာမှာ Van Gogh နှင့်ပန်းချီကားများ၏မှတ်သားဖွယ်အကျင့်ကိုကျင့်မှာအံ့ဩခြင်း ပြခန်း. စုံတွဲများသာယာလှပသို့ snuggling မတိုင်မီဇူးရစ်တွင်လုပ်ဖို့အဘို့ဤမျှလောက်ရှိပါတယ် ရထားစီးနင်း Innsbruck ရှိရန်. ထူးခြားအံ့ဖွယ်ဆီသို့ဦးတည်ရေကန်ဇူးရစ်၏ဘဏ်များတစ်လျှောက်ခရီးသွား alpine ရှုခင်း. သင်တို့သည်လည်းအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့သောတောင်ပေါ်အရပ်၌အံ့ဘွယ်သော Vista ဖြတ်သန်းမယ်. အဘယ်အရာကိုပိုပြီးရင်ခုန်စရာဖြစ်နိုင်?
သင်ချစ်တဦးတည်းအတူရင်ခုန်စရာမီးရထားခရီးကိုယူပြီးစဉ်းစား? ကိုသွားပါ တစ်ဦးကရထား Save အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့သီးသန့်ကိုပုံမှန်အတိုင်းထုတ်စစ်ဆေးနှင့်သင်၏နောက်စွန့်စားမှုစီစဉ်စတင်ရန်!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-5-romantic-train-journeys-europe%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#စိတ်ကူးယဉ်သီချင်း လန်ဒန် စိတ်ကူးယဉ်တတ်သော အချစ်ဇာတ်လမ်း travelflorence travelnice travelparis travelrome ခရီးသွား